Rikoooo.com - FSX/FSX: Olana ara-teknika
FSX/FSX: Olana ara-teknika
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 26 Jan 2017, 14:23
Is FSX/FSX: SE marary? Zavatra tsy mandeha fotsiny? Ity no toerana hangataka olana amin'ny olana ara-teknikao! Tongava saina, fiaramanidina, sipa maya, na inona na inona ...
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by varaciro » 28 Jan 2017, 19:29
Joined: 15 Aogositra 2016, 13:30
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Rolando » 03 feb 2017, 04:31
rehefa manomboka ny fsx, mila esoriko ny hafatra: diso ny fanombohana ny britan'ny Concorde, ary ny hadisoan'ny sceneries 2. ahoana no fomba hamahana ireo olana 3 ireo?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 03 feb 2017, 17:52
Rolando nanoratra: rehefa manomboka ny fsx, mila esoriko ny hafatra: diso ny fanombohana ny britan'ny Concorde, ary ny hadisoan'ny sceneries 2. ahoana no fomba hamahana ireo olana 3 ireo?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Rolando » 04 feb 2017, 03:56
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 04 feb 2017, 05:39
Rolando nanoratra: Misaotra ny valin-teninao. Tsy azoko antoka, ny fomba hanaovana izany. Izaho no afatratra ny Conncords indray, fa ny installer no tsara hanala ny nametraka dika teo anoloan'ny fametrahana vaovao. Ny olana dia toy izany koa. Na ny hevitrao deinstall Tsy maintsy tanteraka ny Concords ary avy eo nampakatra azy?
Hesoriko tanteraka ny Concorde (s) feno FSX jereo raha manome anao izany hafatra izany izy ary raha tsy izany dia apetaho eo ary hojerena izay mitranga.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Rolando » 04 feb 2017, 10:04
- esory tanteraka ireo concordes (tsy hita tao anaty fsx), fa ny hafatra dia mitovy!
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 04 feb 2017, 15:08
(Amin'ny tranga MY, B izany: Program Files (x86) Microsoft GamesMicrosoft Flight Simulator XSimObjectsAirplanes)
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Rolando » 06 feb 2017, 01:23
ny hafatra dia ao amin'ny german (Izaho soisa), dia midika hoe: fahadisoana tamin'ny fanombohana ny concorde british. nefa tsy olana lehibe satria manidina tanteraka ny fiaramanidina. manana tsindrio fotsiny aho rehefa manomboka ny fsx...
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 06 feb 2017, 05:55